डाई प्रवेश welds: सुविधा र विवरण
वेल्डिंग गुणस्तर संयुक्त गरिएका कसरी ठोस निर्धारण गरिन्छ। यस मामला मा, नियन्त्रण जडान सञ्चालन पछि मालिकको विशेष निरीक्षण विधिहरू लागू बनाउँछ जो गैर-इनवेसिव, हुनुपर्छ। केही अवस्थामा, अनुमति र साधन बिना बाह्य परीक्षा, तर महत्वपूर्ण संरचना को मामला मा छैन दृश्य निरीक्षण सीमित हुनु पर्दछ। यो पूरक हुन सक्छ रंग प्रवेश welds - यस्तो यौगिकों विश्लेषण सबैभन्दा, प्रभावकारी सुविधाजनक र विश्वसनीय विधिहरू को एक।
प्रमाणिकरण को विधि को सुविधाहरू
परीक्षण welds यस तरिका केशिका बुझाउँछ, तर बाह्य निवारण मा विशेष ध्यान केंद्रित। त्यो छ, यसलाई उदाहरणका लागि, विरोध रूपमा अल्ट्रासोनिक दोष पत्ता लगाउने द्वारा, एक संयुक्त क्षेत्र को आन्तरिक संरचना जाँच गर्न अनुमति छैन। सामान्यतया, यस्तो परीक्षण खुर झुकाउ धातु गर्न subjected छन्। साथै, रंग नियन्त्रण प्रभावकारी सतह discontinuities गर्न उदीयमान पहिचान गर्न अनुमति दिन्छ।
प्रमाणिकरण सिद्धान्त आदर, यो धातु को संवेदनशीलता आधारित छ penetrant रंग सामाग्री अन्तरक्रिया गर्न। नियन्त्रित जानकारी लोकप्रिय विश्वास विश्लेषण विपरीत, यो कुनै workpiece सतह विशेषताहरु प्रयोग गर्दछ, र परिवर्तनहरू रसायन को संरचना को जलन द्वारा सुनेपछि। रासायनिक र डाई penetrant निरीक्षण विधि को प्रक्रिया मा जो धातु को पहिचान कमीकमजोरी मा डाटा प्रदान परिवर्तन निस्कन बारे जानकारी प्रक्रिया गर्न अनुमति दिन्छ, आधारित छ।
जस्तै विधि नै शायद एक्लै प्रयोग गरिन्छ। सँगै अल्ट्रासाउंड संग - सामान्यतया यो सामान्य जटिल परीक्षण मा प्रयोग गरिन्छ। पहिलो, तपाईं रंग, र त्यसपछि अल्ट्रासोनिक निरीक्षण विश्लेषण गर्नुपर्छ।
लागू गरिएको सामाग्री
पहिले नै उल्लेख रूप मा, निरीक्षण विशेष रसायन प्रयोग बिना पूर्ण छ। सूचक penetrant, क्लेंसेर र विकासकर्ता: घटक तीन प्रकारका समावेश रंग penetrant लागि मानक सेट। त्यो छ, रंग संवेदनशीलता नियन्त्रण कारण काम क्षेत्र को तीन चरण उपचार गर्न सक्रिय छ। प्रयोग विशेष सामाग्री को प्रत्येक चरण मा।
Penetrants - छ, वास्तवमा, विभिन्न प्रकारका मा प्रस्तुत हुन सक्छ जो colorants। पनि रासायनिक ड्राई लागू, तर प्रयोगको प्रविष्ट हुनुपर्छ र अतिरिक्त सञ्चालन, थर्मल उपचार वा मिश्रित तरल संग। एक विशेष धातु रंग penetrant लागि उपयुक्त penetrants धेरै प्रदर्शन गुण आधारित चयन। विशेष, आगो प्रतिरोध, र पर्यावरण विषाक्तता, एक अपवाद को पछि सफाई को लागि आवश्यकता मा, खातामा लिएको र यति मा। डी
नियन्त्रण को स्थानमा आवश्यकताहरू
पूरा निरीक्षण सञ्चालन मात्र विशेष तयार कोठा मा सम्भव छ। यो हावा विनिर्देशों, प्राविधिक सहयोग गर्न संचार उपकरण ठाउँ लागि आवश्यकताहरु खातामा लिन महत्त्वपूर्ण छ, र यति मा। डी कोठा ventilated र कुनै खुला flames वा तीव्र गर्मी छ हुनुपर्छ। प्रकाश सामान्य र स्थानीय, सर्जरी दीपक को साइट नजिक गर्मी सुरक्षित हुनुपर्छ हुनुपर्छ।
सुरुमा इष्टतम जलवायु सिर्जना हेरविचार गर्नुपर्छ - मात्र अनुकूल अवस्थामा गुणात्मक बाहिर गर्न सकिन्छ penetrant डाई। GOST 18442-80, विशेष, हावा सुख्खा र न्यानो हुनुपर्छ भन्ने संकेत गर्छ - रूपमा आवश्यक यी विशेषताहरु प्राप्त गर्न को लागि5° सी मा एक इन्फ्रारेड हीटर विकासकर्ता सुक्खा प्रदान गर्दछ जो प्रयोग गर्न सम्भव छ प्राविधिक उपकरण रासायनिक घटक लागू विधि निर्भर हुनेछ। विशेष, एउटै penetrant बन्दुक लागू लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, स्प्रे डिब्बे, ब्रश र टी। डी
को सिउनी आधारमा तयार
जडान भाग पनि निरीक्षण सञ्चालनका लागि तयार छ। सतह खुरदरापन वा दूषण व्यक्त गरेको छ भने, तपाईं ठीक सामाग्री प्रयोग र सजिलो ह्यान्डलिङ उत्पादन गर्न सक्छन्। अर्को, degreasing गरिन्छ। यो कार्य को लागि, तपाईं घटक को निरीक्षण सेट को एक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो पनि राम्रो degreasing प्रभाव प्रदान गरिएको छ, र त्यो महत्त्वपूर्ण छ - नियन्त्रण संवेदनशीलता वृद्धि गर्न। यो यस्तो उद्देश्य स्ट्रोक लागि प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छैन, तर तपाईं पेट्रोल र एसिटोन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कोठा मा कुनै वेंटिलेशन हो भने, degreasing अर्थ एक कम एकाग्रता मात्र powdery कृत्रिम को जलीय समाधान को आधारमा गरिन्छ। तपाईं penetrant सानो आकारको भागहरु डाई योजना भने, यो लागू गर्न र degreasing संरचना पूर्ण विसर्जन सम्भव छ। अन्य मामलाहरु sputtering प्रविधी वा लक्षित साइट मा, या समाधान मा भिगो एक कपडा लागू मा।
penetrant को आवेदन
पहिलो सूचक penetrant लागू गरिएको छ। degreasing को मामला मा, यो प्रक्रिया छिडकाव, dipping वा उपचार लिंदा द्वारा हुन सक्छ प्रदर्शन - यो workpiece को विशेषताहरु निर्भर गर्दछ। यो जम्मा धेरै तहहरू (4-6) मा बाहिर र समय सुक्खामा प्रत्येक अघिल्लो लेखमा तह संरचना छैन भनेर गर्नुपर्छ। साथै, डाई प्रवेश welds optimally सही परिणाम देखाए, प्रत्येक सफल तह पूर्व को एक अपेक्षाकृत ठूलो क्षेत्र ढाक्न छ। यो हरेक नयाँ तह आकस्मिक संक्रमण परहेज र कुन गलत दरार रूपमा कथित गर्न सकिन्छ sagging, आकृति अघिल्लो स्थान भंग हुनेछ भन्ने तथ्यलाई कारण छ। सञ्चालन अन्तर्गत नकारात्मक तापमान को अवस्था बाहिर छ भने, त्यसपछि penetrant नै 15 ° सी को सर्त हुनुपर्छ
लगत्तै वसूल सूचक फिलिम सफा कपडा वा कपडा प्रयोग हटाइनु पर्छ, कुनै न कुनै कपडा भइरहेको छैन। पूर्व-moisten सामाग्री रक्सी मा हुन र कोटिंग पूरा उन्मूलन गर्न पूर्व सतह सफा गर्नुपर्छ। काम धातु को सतह खुरदरापन मा बाहिर छ भने समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ - यो मामला मा प्रकाश abrasives प्रयोग गर्न अर्थमा बनाउँछ। अर्को, तेल-खुट्टाफिन मिश्रण लागू हुन्छ। यो सम्पूर्ण लक्ष्य क्षेत्र, र त्यसपछि पनि कपडा वा Tissues संग हटाइयो। दुई चरणमा लागि वर्णन गरिएको रंग penetrant को वेल्ड वरिपरि सतह को सफाई र सूक्खापना कायम हुनुपर्छ। यसलाई थप नियामक प्रक्रियाहरु को शुद्धता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
सूचक तहहरू र सफाई रचनाहरूको संग मामला छ रूपमा, विकासकर्ता विभिन्न तरिकामा राखिएको छ - sprayers गर्न कलाई देखि। को गठन कोटिंग को एकरूपता र दृढता पालन गर्न - यो चरण मा मुख्य कुरा। त्यसैले यसलाई ध्यान स्प्रे उपकरण, नलिका र साधन लक्षित साइट वितरण को माध्यम गुणस्तर असर अन्य घटक जाँच गर्न आवश्यक छ। भविष्यमा यो सबै रंग penetrant निरीक्षण, साथै पछि प्रमाणीकरण सञ्चालन गुणस्तर असर गर्छ। विकासकर्ता को निम्न आवेदन सुखाने द्वारा गरिन्छ। यो बोक्न सक्दैन बाहिर जंगली मा polymerization लागि प्रतीक्षा, तर प्रक्रिया कम शक्ति बिन्दु हीटर प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ बढाउने।
को नियन्त्रण क्षेत्र को निरीक्षण
सुक्खा विकासकर्ता, यो सम्भव छ जब लागि लगभग 30 मिनेट प्रतीक्षा निरीक्षण लागि तयारी गर्न। यसबाहेक, नियन्त्रण विधि कम्तिमा 5-गुना वृद्धि प्रदान, रंग penetrant निरीक्षण म्याग्निफायर को प्रयोग पनि समावेश छ। यस प्रविधी layerwise नियन्त्रण लागू गरिएको छ भने, परीक्षण विकासकर्ता संग उपचार पछि2मिनेट भित्र प्रदर्शन हुन सक्छ।
अपरेटर आकलन मा बाँया स्थान विशेषताहरु फिक्स - विशेष मा, पत्रिका आकृति, आकार मा आयाम प्रवेश आदि तथापि, रंग penetrant खडा मुख्य समस्या, सतह कमजोरीको स्पष्ट छन् जो प्रक्रिया पूरा भएपछि आफूलाई प्रकट पत्ता लगाउन छ ... यांत्रिक क्षति र अत्यधिक आगमन संग निशान र चर्किएको को संक्षारक प्रभाव र पत्ता सकिन्छ।
निरीक्षण समयमा सुरक्षा
सुरक्षा उपाय आवश्यकताहरु जाँचको समयमा आगो र विस्फोट जोखिम कारण। त्यसैले न्यूनतम कपास गाउन, टोपी र रबर पन्जा, पाउडर ढाकिएको हुनुपर्छ जो सतह को एक भाग शामिल, वस्त्र तयार आवश्यक छ। वास्तवमा, साइट पूर्ण सुरक्षा उपाय संग गरिहाले गर्नुपर्छ। प्रक्रिया समयमा, कुनै नाङ्गो flames वा झिल्काहरू हुनुपर्छ। रंग penetrant परीक्षण नियमित तरिका मा एउटै कोठामा प्रदर्शन गरिएको छ भने, तपाईं आगो सुरक्षा उपाय संग धूम्रपान र अनुपालन बन्देज उपयुक्त संकेत स्थापना गर्नुपर्छ। Rags, पोंछे र ज्वलनशील एजेन्ट एक दुर्दम्य कन्टेनर भण्डार गर्नुपर्छ।
यो अन्य विधिहरू को कुल दायराबाट चयन गरेर अधिकतम रूपमा वेल्ड गुणस्तर मूल्याङ्कन लागि विधि विचार गलत हुनेछ। यो विधि विशेष को workpiece सतह को विश्लेषण केन्द्रित छ जो परीक्षा, निर्देशित छ। अर्थात् रंग penetrant नियन्त्रण एक व्यापक उपाय छैन, तर एक अपेक्षाकृत उच्च दक्षता संग बाह्य कमजोरीको जानकारी प्रदान गर्दछ। यो विधि सिउनी आन्तरिक संरचना को छानबिन अन्य विधिहरू पूरक गर्न भने, तपाईं धातु को संरचना बारे पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को पहिचान कमजोरीहरू एक सम्भव सुधार मा निर्णय छ। केही अवस्थामा, उत्पादित माध्यमिक वेल्डिंग - यो preform संरचना को बल मा प्रभाव को दृष्टिकोण देखि कमजोरीहरू संख्या र महत्व निर्भर हुनेछ। समस्या निवारण कहिलेकाहीं यस प्रकारको शोषण निर्माण मा पुरानो seams र जोइन्टहरूमा को संरचना को विश्लेषण लागि प्रयोग गरिन्छ।
बश: मूल को देश। रबर्ट बश GmbH - जर्मन गुणस्तर
मासु प्राथमिक प्रशोधन: अनुक्रम प्रविधि
रूस ठूलो उद्यम। रूस मा औद्योगिक उद्यम
मंगोल टाटर योक। यसको महत्त्व रूसको ऐतिहासिक भाग्यमा
लक्षण र biliary भाटा gastritis को उपचार
स्मार्टफोन हुआवेई मेट 8: समीक्षा र सुविधाहरू
को गोडा डिग्री 1 को पुराना ओस्टियोआर्थराइटिस: उपचार र रोकथाम। Endoprosthesis। भौतिक चिकित्सा
अन्डा माछा सूप: सरल व्यञ्जनहरु
व्यञ्जनहरु चिकन कलेजो।
म जब एक ढोका छनौट लागि के हेर्नुपर्छ?
एक भडौआ के हो? परिभाषा र उदाहरण
डिस्पोजेबल इलेक्ट्रोनिक सिगरेट: औंलाहरू घुसाउनुहोस्
अलंकार: पाना आकार को मोटाई, प्रकार, पद
अनुकूलता लियो-महिला, मानिस-Scorpio - राम्रो जोडी कि?
सोभियत पनडुब्बी K-129: मृत्यु को कारण